Iwo akasarudzika Linux mutambo vavaki ve2019 Valve. | Linux Vakapindwa muropa
Isu tinopinda chikamu chekupedzisira chezvikamu zvakateedzana zvakapihwa mibairo yemitambo yegore. Icho mhedzisiro yeongororo iyo iyo yakasarudzika portal Kubheja Pane Linux inoita pakati pevaverengi vako. Isu tinoenderera nezvatakatanga mune yedu yapfuura posvo; kunyorwa kwemamwe mazita evaya vakasarudzwa semamwe emakambani ekuvandudza e2019
Mune ino kesi zviri kuna Valve.
1 Vagadziri vemitambo yeLinux. Valve
1.2 Hafu-Life 2
1.4 Dota varidzi vepasi
1.5 Steam OS
Vagadziri vemitambo yeLinux. Valve
Zvichida Valve iri iyo kambani yakaita zvakanyanya kushandura Linux kuita chikuva chemitambo yemavhidhiyo. Pamusoro pechirongwa chekutora kurodha pasi kubva kuchitoro chayo, uye nekuparadzira kwakasarudzika mumitambo, Valve yakaburitsawo chishandiso chekushandisa mitambo yakagadzirwa kunyanya yeWindows.
Iyo kambani yakavambwa muna 1996 nevaviri vaimbove vashandi veMicrosoft.
Icho chiri pamusoro mutambo munhu wekutanga kupfura ndewemhando yesainzi yekunyepedzera. Ndiwo zvakare musoro wekutanga wakagadzirwa nekambani.
Mutambo nyeredzi Gordon Freeman, wezve dzidziso musayendisiti kubva kuAnomalous Materials Laborator paBlack Mesa Research Center. Chiito ichi chinoitika munzvimbo hombe yepasi pevhu uye yepamusoro yakavanzika yesainzi yakaiswa munzvimbo yemauto isina kushandiswa iri murenje reNew Mexico.
Kuedza kwakundikana kunokonzera kuvhurwa kweiyo interdimensional portal kuburikidza iyo boka revatorwa inopinda. Kudzora Freeman isu tichafanirwa kusevha murabhoritari uye munzira kuenda kupasi.
Nhoroondo inoitika makumi maviri emakore mushure mezviitiko zvemutambo wapfuura.
Kana uchiridza, vNgatikanganwe kutora kutonga kwesainzi Gordon Freeman, anozviwana ari paPasi rakazara nevatorwa, rakatorerwa zviwanikwa zvaro zvese uye mune vanhu vashoma uye vashoma vasara. Freeman anozviona achibatanidzwa mune risingafadzi basa rekununura nyika kubva kune zvakaipa zvaakaburitsa paBlack Mesa.
dota Ndicho chirevo muChirungu cheDziviriro yeAncestors. Iyi ndiyo chaiyo-nguva chiito zano mutambo.
Mutambo wega wega unoumbwa nemapoka maviri anopikisana. Iyo Dire uye Inopenya. Imwe neimwe ine nhare ine chivakwa chikuru chinonzi Ancestor. Iwo madzitateguru naivowo anodzivirirwa nezvivakwa zvidiki zvidiki
Zvikwata zviviri izvi, kazhinji zvinoumbwa nevatambi vashanu rimwe nerimwe, zvinonangana sevadziviriri veAncestors avo.
Dota varidzi vepasi
Yakanga iri nyaya yenguva munhu asati aburitsa chimwe chinhu chakafanana neHarry Potter's yemashiripiti chess set. Kana zvirinani zvinondiyeuchidza zvakawanda.
Dota varidzi vepasi anotikurudzira yemakwikwi nzira yemutambo yakafuridzirwa nechess. Vatambi vanoisa mavara anozivikanwa se "magamba" panhandare yehondo muchimiro che 8 × 8 grid. Mushure mekunge vatambi vavaronga, magamba echikwata chimwe anongoerekana arwisa timu inopikisa pasina mutambi achifanirwa kuita chero chimwe chinhu.
Mutambo wega wega unoratidzira vanosvika vasere vatambi pamhepo vanochinjana kutamba mumwe neumwe-mumwe-fomati. Uyo anokunda achave mutambi wekupedzisira akamira mushure mekubvisa magamba ese anopikisa.
Kana iwe usina chero munhu waungatambe naye, mumwe mutambi achipesana ne bot mutambo modhi inowanikwawo, pamwe neiyo 'freestyle' maitiro maitiro ayo asingaise miganho pane gamba musanganiswa. Chekupedzisira, isu tine duo modhi umo vatambi vanoshandisa akapatsanuka mabhodhi, asi vachigovana hutano nematanho uye vachiita sechikwata. Mukufamba kwemutambo, vatambi vanowana goridhe uye neruzivo mapoinzi, ayo anoshandiswa kukwidziridza magamba uye zvimwe zvinotamba zvikamu kuti zviwedzere kusimba.
Steam OS Iko kugoverwa kweLinux kwakatorwa kubva kuDebian, asi nekernel yakagadzirirwa kuitiswa kwemitambo yemavhidhiyo. Yakagadzirirwa vhidhiyo yemitambo yekunyaradza yakagadziriswa neValve, vanogona zvakare kumhanya pane Hardware ine zvinotevera hunhu.
Zvinodikanwa zvekuisa Steam OS
Processor: Intel kana AMD 64-bit
Ndangariro: 4 GB kana kupfuura RAM
Hard disk: 200 GB kana kupfuura yemahara nzvimbo
Mifananidzo: NVIDIA, AMD kadhi yemifananidzo (RADEON 8500 kana kupfuura, Intel
USB chiteshi chekumisikidza, UEFI Firmware (yakakurudzirwa)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vagadziri vemitambo yeLinux. Valve mitambo